आजको चन्द्रगहण ८ राशीलाई अशुभ, दुष्प्रभावबाट बच्न के गर्ने के नगर्ने ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आजको चन्द्रगहण ८ राशीलाई अशुभ, दुष्प्रभावबाट बच्न के गर्ने के नगर्ने ?
डिसी नेपाल , ११ श्रावण २०७५
काठमाडौं। यो शताब्दीकै सबैभन्दा लामो खग्रास चन्द्रग्रहण आज लाग्दैछ । २१औं शताब्दीको सबैभन्दा लामो यो खग्रास चन्द्रगहण नेपाल, भारत, एशिया, अस्ट्रेलिया, रुस, युरोप लगायत केहि अफ्रिका र उत्तरी अमेरिका सहित विश्वका अधिकांश ठाउँबाट देखिनेछ । यो चन्द्रग्रहणलाई ब्लडमून पनि भनिएकोछ, केहि समय तामा जस्तै रातो र केहि समय पुरै रातो देखिने भएकाले यस खग्रास चन्द्रग्रहणलाई ब्लडमून भनिएको हो, यस्तो संयोग १०० वर्षभन्दा पछि आएको हो ।
हाम्रो देश नेपालमा नेपाली समय अनुसार आज रातीको १२ बजेर ९ मिनेटमा स्पर्श हुनेछ र रातीको १ बजेर १५ मिनेटदेखि सम्मिलन अर्थात् पूर्ण खग्रास प्रारम्भ भर्इ रातीको २ बजेर ८ मिनेटमा मध्य हुने र रातीको २ बजेर ५९ मिनेटमा उन्मिलन अर्थात् खग्रासको अन्त्य हुँदै रातीकै ४ बजेर ६ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ । अतः सम्पूर्ण ग्रहण अवधि ३ घण्टा ५७ मिनेटको हुनेछ भने ग्रस्तोदित खग्रास १ घण्टा ४४ मिनेटको हुनेछ ।
ग्रहणको मेष, सिंह, वृश्चिक र मिन राशीमा शुभ प्रभाव पर्नेछ । बाँकी राशीको लागि भने ग्रहण शुभ छैन । मिथुन तुला मकर र कुम्भ राशीमा ग्रहणको खराब प्रभाव पर्नेछ भने अन्य राशीमा मिश्रित प्रभाव रहनेछ । जुन राशीको लागि ग्रहणले शुभ फल दिँदैन ती राशी हुनेहरुले केही उपाय गरेर यसको दुष्प्रभावबाट बच्न सकिनेछ ।
ज्योतिषीहरुका अनुसार ग्रहणको दुष्प्रभावबाट बच्न ग्रहणकालमा शिव चालिसाको पाठ वा भगवान शिवको नामको जप गर्नु लाभदायक हुनेछ । गरिबलाई अनाज दान गर्ने, तुलसीको पत्ताको सेवन गर्नु समेत शुभ हुनेछ । ग्रहण देखिने क्षेत्रमा खानामा तुलसी मिसाएर खानु शुभ हुनेछ । ग्रहणपछि पूरै घरको सफाइ गर्नुहोस् । दान पुण्य गर्नुहोस् । सम्भव भएमा कुनै पवित्र नदीमा स्नान गर्नुहोस् ।
ग्रहणकालमा पति पत्नीबीच दूरी कायम राख्नुहोस् । यस क्रममा शारीरिक सम्बन्ध नबनाउनुहोस् । ग्रहणका समयमा भएको सम्बन्धबाट जन्मिने सन्तानले धेरै कष्टको सामना गर्नुपर्नेछ । ग्रहणकालमा पूजापाठ नगर्नुहोस् । ग्रहणको समयमा खाना नखानुहोस् ।